Habka ugu haboon ee aad ugu jawaabi karto qof aadan rabin oo jaceyl kuu soo bandhigto (Talooyin Muhiim ah ) | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Habka ugu haboon ee aad ugu jawaabi karto qof aadan rabin oo jaceyl kuu soo bandhigto (Talooyin Muhiim ah )
Friday, September 01, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Qofka ku jecel waxa ay marwalbo kaaga baahantahay xushmad iyo in aad marwalbo u dhimriso waxaase mararka qaar dhacdo in qof aadan jecleyn uu kuu qaado jaceyl xad dhaaf ah haddaba maanta Markacadey.net waxey ku bareysaa qaabka aad u wajihi lahayd haddii qof aadan rabin uu kuu soo bandhigto Jaceyl .
– hadal kulul ha ugu jawaabin : dareenka qalbiga ka yimaado qofna ma xukunto ee waa wax uu eebe ku beero habada qofkan jaceylka kuu soo bandhigtay kasoo qaad adiga oo kale oo u muuji sidii aad jeclaan lahayd in laguula dhaqmo .
– Maya toos ah haku oran : iska jir in aad diidmo qayaxan ka hor geyso taas oo laga yaabo in qalbigiisa ay wax yeelo u geysato oo aad ku reebto dhaawac Nolashiisa aan ka harin.
– Haye been ah qalbi dajis ha uga dhigin : isja jir in aad Haye aan qalbiga jirin oo iga sii jeedi ah aad ku tiraahdo ruux jeceyl kusoo bandhigtay Markacadey.net waxay kuu xaqiijineysa qofkii aad sidaas yeesho inadan qalbi u dajin oo aad u horseedi doonto qalbi hur iyo kalsooni daro Farabadan .
Ugu danbeyntii waxaan kugula talineynaa in aad Maskax dagan ku qaabisho jawaabta aad siineyso Ruuxa aadan rabin oo jaceylka kuula yimaado hana isku dayin inaad isla markiiba jawaab siiso u sheeg in aad u baahantahay waqti aad kaga soo fakarto , kulankiina labaadne ha noqdo adigoo qorshihii aad ku wajihi lahayd Soo dajistay .